chmod ဖြင့် GNU / Linux တွင်အခြေခံခွင့်ပြုချက်များ Linux မှ
Wada | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လူကောင်းများ! 🙂ပထမ ဦး စွာပြောရလျှင်ထိုက်တန်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်ရပ်ရွာလူထုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအလှူငွေဖြစ်သည်
=> အသုံးပြုသူ၊ အုပ်စုများနှင့်အခြားသူများ
1 ဖိုင်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်၏ 1.- အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ
2 2.- လမ်းညွှန်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ
3 ၃။ အသုံးပြုသူများ၊ အုပ်စုများနှင့်အခြားသူများ
4 octal အတွက် 4.- chmod
ဖိုင်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်၏ 1.- အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ
ရိုးရှင်းသောဖိုင်များအတွက်အခြေခံ attribute ၃ ခုရှိသည်။ ဖတ်၊ ရေး၊ execute ။
>> ခွင့်ပြုချက်ကိုဖတ်ပါ (ဖတ်ပါ)
>> ခွင့်ပြုချက်ကိုရေးရန် (ရေးရန်)
ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရေးသားရန်သင့်တွင်ခွင့်ပြုချက်ရှိလျှင်ဖိုင်ကိုသင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၄ င်း၏ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်
>> ခွင့်ပြုချက်ကိုစီရင် (execute)
အကယ်၍ ဖိုင်သည် execute ခွင့်ပြုချက်ရှိလျှင်၎င်းသည် program တစ်ခုကဲ့သို့လည်ပတ်ရန် system ကိုသင်ပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည် "foo" ဟုခေါ်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မည်သည့် command ကိုမဆို execute လုပ်နိုင်သည်။
သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ကိုဖတ်ရန်နှင့် execute လိုအပ်သော script တစ်ခု (စကားပြန်)၊ စုစည်းထားသော program ကိုသာဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
r ရေးသားခြင်းကိုဆိုလိုသည်နှင့်ထံမှလာသည် REad
w စာဖတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်နှင့်ထံမှလာသည် Wရိုးရာဓလေ့
x ကွပ်မျက်ဆိုလိုတယ်နှင့်ထံမှလာသည် eXကဗျာ
ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲရန် chmod ကိုအသုံးပြုခြင်း
chmod (change mode) သည်ခွင့်ပြုချက်များကိုပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသော command ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်များကိုဖိုင် (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီး + (+) သို့မဟုတ် - (အနှုတ်) ဖြင့်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်အရေးကြီးသောဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်တားဆီးလိုပါက chmod command ဖြင့်သင်၏ "ဖိုင်" ပေါ်တွင်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ကိုသာဖယ်ရှားပါ
သင့်ဖိုင်ကို $ chmod
သင် executable script တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကရေးပါ
$ chmod + x ကို tuScript
သငျသညျတခါမှာ attribute တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းလိုလျှင်
$ chmod -rwx ဖိုင် $ chmod + rwx ဖိုင်
ခွင့်ပြုချက်များကိုအတိအကျပေါင်းစပ်ရန် = sign (တန်းတူ) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤ command သည် read များကိုဖယ်ရှားပြီးဖတ်ရှုမှသာထွက်ခွာနိုင်သည်။
$ chmod = r ကိုဖိုင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ HDD သို့မဟုတ် partitions မှအချက်အလက်များကိုသိရန် command ၄ ခု
လမ်းညွှန်တစ်ခုသည်စာဖတ်ခွင့်ပြုထားပါက၎င်းတွင်ပါသောဖိုင်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်သည်၎င်း၏အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန် "ls (list directory)" ကိုသုံးနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်ခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ဖတ်ရှုသည်ဆိုပါကသင်ခွင့်ပြုချက်မဖတ်ပါက၎င်းဖိုင်များ၏အကြောင်းအရာများကိုသင်ဖတ်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
Execution သည်သင်ဖိုင်တွဲအတွင်းရှိဖိုင်များကိုကြည့်ရှုသောအခါလမ်းညွှန်၏အမည်ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပရိုဂရမ်တစ်ခုကပြုလုပ်သောရှာဖွေမှုများတွင်ဤခွင့်ပြုချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ရှာ
၃။ အသုံးပြုသူများ၊ အုပ်စုများနှင့်အခြားသူများ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ခွင့်ပြုချက် (၃) ခုနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းမည်၊ မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသိပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ခွင့်ပြုချက် (၃) ခုကိုမတူညီသောနေရာ ၃ ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
အသုံးပြုသူ (u) သည်အသုံးပြုသူမှလာသည်
အုပ်စု (ဆ) အဖွဲ့မှလာသည်
အခြားသူများ (သို့မဟုတ်) သည်အခြားမှလာသည်
ခွင့်ပြုချက်ကိုနေရာ ၃ နေရာတွင်ပြောင်းပါ။ "ls -l" ပါသောလမ်းညွှန်များကိုသင်စာရင်းပြုစုသောအခါအလားတူအရာတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
-r - r-r-- 1 wada အသုံးပြုသူများ 4096 13ပြီ 19 30:XNUMX ဖိုင်
ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစား ၃ ခုအတွက်ဒီ ၃ r's ကိုသတိပြုပါ
x ကို ------------- x ------------- က x | ခွင့်ပြုချက်များ | ပိုင်ဆိုင်သည် x ကို ------------- x ------------- က x | rwx ------ | အသုံးပြုသူ | | --- rx --- | အုပ်စု | | ------ rx | အခြား | x ကို ------------- က x ------------- က x
ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ငါတို့မှာဖိုင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
-rwxr-xr-x 1 wada အသုံးပြုသူများ 4096 13ပြီ 19 30:XNUMX ဖိုင်
$ chmod gx, နွားဖိုင်
-rwxr - r-- 1 wada အသုံးပြုသူများ 4096 13ပြီ 19 30:XNUMX ဖိုင်
$ chmod ux ဖိုင်ကို
-r-xr - r-- 1 wada အသုံးပြုသူများ 4096 13ပြီ 19 30:XNUMX ဖိုင်
$ chmod ဦး -x + ဖိုင်ကို
-rw-r - r-- 1 wada အသုံးပြုသူများ 4096 13ပြီ 19 30:XNUMX ဖိုင်ကို
octal အတွက် 4.- chmod
chmod ၏ octal သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်
စာဖတ်ခြင်း ၏တန်ဖိုးရှိပါတယ် 4
စာအရေးအသား ၏တန်ဖိုးရှိပါတယ် 2
သတ်ခြင်း ၏တန်ဖိုးရှိပါတယ် 1
x ကို ----- x ----- x ----------------------------------- က x | rwx | ၇ ဖတ်၊ ရေး၊ | rw- | ၆ စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း | rx | ၅ စာဖတ်ခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ခြင်း | r-- |7| စာဖတ်ခြင်း | -wx |6| ရေးသားခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်ခြင်း | -w- |5| စာရေးခြင်း | --x |4| Execution | | --- |3| ခွင့်ပြုချက်မရှိပါ x ကို ----- x ကို ----- က x ----------------------------------- က x
x ကို ------------------------ x ကို ----------- x ကို | chmod ဦး = rwx, g = rwx, o = rx | chmod 775 | | chmod ဦး = rwx, ဆ = rx, o = | chmod 760 | | chmod ဦး = rw, ဆ = r ကို, o = r ကို | chmod 644 | | chmod ဦး = rw, ဆ = r ကို, o = | chmod 640 | | chmod ဦး = rw, သွား = | chmod 600 | | chmod ဦး = rwx, သွား = | chmod 700 | x ------------------------ x ----------- x
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » chmod နှင့်အတူ GNU / Linux တွင်အခြေခံခွင့်ပြုချက်များ
ငါ octal ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်တော့မှမနားလည်ခဲ့။ the ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလှည့်ကွက်တစ်ခုသည် binary တွင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ rwx သည်3bits (Read, Write, eXecute) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သင်ခွင့်ပြုချက်ကိုဖတ်ရန်နှင့်ရေးလိုပါက octal တွင်နံပါတ် (၄) ပါသော binary ၁၁၀ ရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းကို GUO (Group, User, Others) အနေဖြင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသည်ကိုသင်သိလျှင်၎င်းကိုသင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အုပ်စုနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖတ်၊ ရေး၊ စီရင်၊ အခြားသူများအတွက်စာဖတ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်; ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟု: 110 -> 4
သတိထားပါ ၁၁၀ binary သည် octal တွင်နံပါတ် ၄ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
binary နံပါတ် 110 သည် octal နံပါတ်6ဖြစ်သည်
r = ဖတ် (ဖတ်)
w = ရေးမယ်
x = exe (ကွပ်မျက်မှု)
- = ခွင့်ပြုချက်မရှိ။
u = ပိုင်ရှင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး။
g = အုပ်စု။
o = အခြားသူအားလုံး။
ls -l တွင်မူခွင့်ပြုချက်ကို directory သို့မဟုတ် file တစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးဥပမာအားဖြင့်ပေးသည်။
sudo ugo + rwx 'filename' // ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။
r သည်ရေးသားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Read မှလာသည်
w ဆိုတာဖတ်မယ်၊ ရေးတာမဟုတ်ဘူး
x သည် execute ကိုဆိုလိုသည်။ eXecute မှဖြစ်သည်
(R) Read သည် Read is (W) Write is Write
ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်မှတ်စုများရေးသားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှားအတွက်ချက်ခြင်းကျွန်ုပ်ချက်ခြင်းပြင်ပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်အမှားဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Thank
၎င်းသည်သင့်အားအမှားတစ်ခုပေးသည်။ .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကစာမူ၏ရေးသားသူဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုတင်ပို့ပြီးတာနဲ့ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်မပေးပါ။
နောက်ထပ်အမှားတစ်ခု .. ..in point3.- .. သင်အသုံးပြုသူထံမှရေးသားခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားလိုပါကသင်ပြောလျှင် .. $ chmod ux file ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းသည် $ chmod uw file ဖြစ်သင့်သည်။ .. မင်းပြောတာနဲ့လိုက်ဖက်တယ် .. ..
r သည် READ ကိုဆိုလိုသည်။ Read မှဖြစ်သည်
w သည် WRITE ကိုကိုယ်စားပြုပြီး Write မှလာသည်
ငါ Samba နှင့်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုမျှဝေရန်နှင့် guests ည့်သည်များအားဖတ်ရန်နှင့်ရေးသားရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်ကွန်ပျူတာနှစ်ခု (or ည့်သည်သို့မဟုတ် client) မှတစ်ခုမှဖိုဒါအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးလိုက်သောအခါဖိုင်တွဲအသစ်တွင်ဖတ်ခွင့်နှင့်ရေးသားခွင့်မပေးနိုင်ပါ။ လူတိုင်းအတွက်ရေးပါ ... ဖိုဒါတစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းခွင့်ပြုချက်ကိုပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ဒီဟာနည်းနည်းလေးခက်ခဲပါတယ် စကားမစပ်ငါအရာအားလုံးကို graphical interface တစ်ခုမှတဆင့်လုပ်တယ်။
အလွန်ရှင်းလင်းသောဆောင်းပါး။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် -
| chmod ဦး = rwx, ဆ = rx, o = | chmod 760 |
| chmod ဦး = rwx, ဆ = rw, o = | chmod 760 |
| chmod ဦး = rwx, ဆ = rx, o = | chmod 750 |
Steven Abraham Santos Farias ဟုသူကပြောသည်
Steeven Abraham Santos Farias အားပြန်ပြောပါ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် x သည်5နှင့်ညီမျှပြီးဥပမာတွင်6ဖြစ်သည်
ဆ = rx6အမှား
ဆ = RX5မှန်ကန်သော
ဆ = RW6မှန်ကန်သော
Rainier Herrera ဟုသူကပြောသည်
Dark Purple အတွက်:
ယခုထိသင်ယူနေဆဲ မှနေ၍၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဗဟုသုတကိုရယူခဲ့သည် (၎င်းသည်သင်၏ပြproblemနာအတွက်သင့်ကိုကူညီပါမည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြိုးစားသင့်သည်၊ သို့သော်ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ )
၎င်းသည်မိဘဖိုလ်ဒါနှင့်အတွင်းအပြင်ရှိဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုင်များနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးပြုသူများ၊ အုပ်စုများနှင့်အခြားသူများအားလုံးကိုခွင့်ပြုချက်အားလုံးပေးလိမ့်မည် (ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖန်တီးထားသောအသစ်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်အရအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ slax ၌တည်ရှိသည်)
Rainiero Herrera အားပြန်ပြောပါ
ဂရပ်ဖစ်ပုံစံတွင်၊ “ ဤအမိန့်ကိုထပ်တလဲလဲလုပ်ပါ” သို့မဟုတ်“ ပါ ၀ င်သောဖိုလ်ဒါများအတွက်လုပ်ပါ”” ဆိုသည့် option ကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။
ငါဟာအဆင်ပြေဖို့ 777 ကိုအမြဲတမ်းစက်ထဲပစ်ချခဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီပညတ်တွေနဲ့ငါဘက်ထရီတွေကိုထည့်ပြီးသတိထားရမယ်။ အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Manuel ကာလက် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေ ... ဆက်လုပ်ပါ
Manuel Caleb ကိုပြန်ပြောပါ
အရမ်းအရမ်းကောင်းတယ် thank ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကြည့်ပါ၊ ဆက်စပ်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ mp4 တွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုချက်များနှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ငါ့ကိုခွင့်ပြုချက်တွေပြောင်းလဲခွင့်မပြုဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖတ်တာပဲ။ သင်ပေးသောအမိန့်များကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ သို့သော်အဖြေဖြစ်သည်
chmod: "/ media / 0C87-B6D2" ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်း: ဖတ်ရန်အတွက်သာဖိုင်စနစ်
super user အဖြစ် logging လုပ်ပါ
သင့်မှာသင့်တော်တဲ့ယာဉ်မောင်းရှိချင်မှရှိမယ်။ NTFS ဖိုင်စနစ်ဖြင့် NTFs-3g အထုပ်ကိုတပ်ဆင်ထားမှမဟုတ်လျှင်သင့်ကိုရေးခွင့်မရှိပါ။ mp4 တွင်မည်သည့်စနစ်ရှိလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
cristhian Alexis galeano ruiz ဟုသူကပြောသည်
cristhian alexis galeano ruiz သို့ပြန်သွားပါ
Yerson Rico ဟုသူကပြောသည်
တိုက်ဆိုင်စွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်စွာငါ chux command အကြောင်း linux systems Administration ၏လမ်းညွှန်တွင်ဖတ်နေသည်။ ထိုအရာကကျွန်ုပ်အားထပ်မံခွင့်ပြုချက်များဖြစ်သော -s-S နှင့် -t သုံးခုအကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ ငါရှင်းပါတယ်၊ နက်ဖြန်နေ့၌အခြားကောင်းသောစာဖတ်ရန်၊ သင်၏စားပွဲများ၊
Yerson Rico ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ဖိုင်များ၊ chmod သို့မဟုတ်ထိုဖိုလ်ဒါထဲတွင်ရှိသောအရာများကိုမည်ကဲ့သို့တည်းဖြတ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်။
Juan Gomez အားပြန်ပြောပါ
MA သမာလ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောအလှူငွေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါအရေးကြီးသောစဉ်းစားကြောင်းရှင်းလင်းချက်လုပ်ချင်ပါတယ်။ စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းသည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မတူပါ။ စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မဆိုလိုပါ။
၁ ။ တစ်ခုခုကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ကူးပြောင်းပါ။ U. TC prnl ။
2. tr ။ တစ်စုံတစ်ခုကိုရွှေ့ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်ရန်။
၃ ။ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဘေးဖယ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြissueနာတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ငါဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်မဟုတ်လျှင် "Eliminate" ရန်အားထုတ်မှုအတွက်ကပြောသည်ဘယ်တော့မှ🙂ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ရပ်တန့်ပြီးရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fabian garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်နားလည်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အုပ်စု "xyz" ရှိပါကကျွန်ုပ်သည် r မှခွင့်ပြုချက်ကိုမည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။ ပိုင်ရှင် (များ) ကိုသာအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်အုပ်စုအတွက်သာဖြစ်သည်။
Fabian Garcia သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ lubuntu ၌ရှိသောကွန်ပျူတာများနှင့်ဒိုမိန်းတွင်အသုံးပြုသူမှပြaနာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒိုမိန်းအသုံးပြုသူနှင့်ဟုတ်ကဲ့၊ mozilla နှင့် thunderbird ကိုဖွင့်သောအခါ system တစ်ခုလုံးအေးခဲနေကြောင်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Justo Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး။ ဤဖိုရမ်မှဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ် ဦး ၏အဖြေကိုအောက်ပါမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သာကျွန်တော်သာစဉ်းစားချင်ပါလိမ့်မည် - « အကယ်၍ အသုံးပြုသူ A ကိုကျွန်ုပ်၏အုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းပါက၊ ဤအုပ်စုအုပ်စု၏ခွင့်ပြုချက်သည် rwx ဖြစ်၍ ဤအုပ်စု၏အသုံးပြုသူများအားလုံး။ A အပါအ ၀ င်အတွင်းပိုင်းဖိုင်များ / လမ်းညွှန်တွင်ဤ rwx ခွင့်ပြုချက်များရှိပါသလား။ Group အတွင်းရှိ internal files များတွင် rwx ရှိပြီးသားဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!!!! 🙂
ငါသည်ဤနှင့်ဤအချက်အလက်လုံးဝအသစ်တစ်ခုဖြစ်၏။ ဒါဟာငါ့အဘို့အံ့သြစရာထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့အလှူငွေ, အလွန်အသုံးဝင်သော, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (:
Eduardo Aledo Loredo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်သင်ကြားပေးပါသည် ... အလွန်သင်ကြားနည်း။
Eduardo Alemán Loredo အားပြန်ပြောပါ
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်၊ ဒါက xDDDD ကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်
သင်၏ထည့် ၀ င်မှုသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်မှာထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သောဖိုင်များသည် "read only" execute ဖြစ်ကြောင်းပြaနာတစ်ခုရှိသည်
777 ဖိုင် chmod
root @ Leps: / home / leps # chmod: "Downloads / canaima-popular-4.1 ~ stable_i386 / canaima-popular-4.1 ~ stable_i386.iso" ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်း - ဖတ်ရန်သာဖိုင်စနစ်
ဖိုင်တွေအားလုံးအတူတူပဲ၊ တကယ်တော့ငါ Ctrl + Alt + F1 နဲ့ root ကို run လိုက်တယ်။ ပြီးတော့အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက် !! ဒါဟာငါ့အတွက်အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သည်။
Gustavo Urquizo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောမှတ်စု။ ခွင့်ပြုချက်ယူရန်တိုက်တွန်းခံရပြီးဤသင်ခန်းစာကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
Gustavo Urquizo အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ် install လုပ်ခြင်း၏ root ပေါ်တွင် chmod -R 777 ကိုပြုခဲ့သည်။
kali linux ကို restart လုပ်ပါ
ဟုတ်တယ်၊ အားလုံးပြတ်တောက်သွားပြီ၊ Ubuntu ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရမယ်၊
အဆိုပါသင်ခန်းစာအလွန်ကောင်းသော, အလွန်ပြည့်စုံသည်။ သေးငယ်သောအမှားများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုတည်းဖြတ်။ မရနိုင်ဟုမှတ်ချက်ပေးပြီးဖြစ်သည်။ သင်ယူရန်အလွန်ကောင်းသော
အဲဒီမှာသင်ရှုပ်ထွေးတယ်။ ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပါ၊ ပြုပြင်ပါ
အလွန်အသုံးဝင်! Linux စီမံခန့်ခွဲမှုမှာသိပ်မပါ ၀ င်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတွေကများပါတယ်။
ဘာသိုလ်ဒို ဆွာရက်ဇ် ပီရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
Sincelinux ဘလော့ဂ် from ည့်သည်များမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
LMint ကဲ့သို့ ubunter distro ကို အသုံးပြု၍ ရယ်စရာကောင်းသည်။
tema ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို 'sudo' (ငါ့သုံးစွဲသူ၏စကားဝှက်ကိုတောင်းခံခြင်း) အားဖြင့် / usr / share / themes လမ်းညွှန်သို့ကူးယူပြီးကူးယူသည်။
ထို system ဖိုင်တွဲတွင် 'ls -l' သို့မဟုတ် 'ls -la' ကို အသုံးပြု၍ စာရင်းပြုစုသောအခါအခင်းအကျင်းဖိုရမ်သို့မဟုတ်ဆောင်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူ (နှင့်အုပ်စု) မှပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်၊ အမြစ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအခင်းအကျင်း၏လမ်းညွှန်ရှိရေးသားမှုခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်တော့မည်။ ၎င်း၏ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများအား 'ls -laR' ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူသည်တစ် ဦး တည်းသာရေးသားနိုင်သည် ဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုင်များကဆိုသည်။ သေချာတာကငါအနန္တတန်ခိုးရှင် Root ပါဘဲ။
ငါ့ကို Terminal မှ 'cd / usr / share / themes / the-theme-downloaded' ဖြင့် ထား၍ 'sudmod' သို့မဟုတ် root permissions မလိုဘဲ 'chmod -Rv uw *' ကိုရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။ သူကကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူ၏ရေးသားခွင့်ကို 'the-theme-downloaded' ရှိဖိုင်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများအားအောင်မြင်စွာပြုပြင်နိုင်ကြောင်းသူကအကြောင်းကြားသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်မိခင်ဖိုလ်ဒါ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်ကလုပ်ဆောင်သောနေရာမှ 'the-theme-downloaded' ကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
download လုပ်ထားသောအခင်းအကျင်း၏ဖိုင်တွဲကို“ Box” မှတဆင့်စစ်ဆေးသောအခါ၊ ပထမဆုံးသောသော့ဖိုင်တွဲကိုသော့ခလောက်ဖြင့်တွေ့သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပျက်လာသည်။ ဤဖိုလ်ဒါတစ်ခုခုကိုကော်ပီကူး။ ၎င်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူ၎င်းကိုကူးထည့်နိုင်သည်။ ငြင်းပယ်ခံရရမည်။ ပြီးတော့အဲဒီကော်ပီကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ခွင့်ပြုချက်မရဘူး၊ ငါထင်တယ်၊ အတွင်းပိုင်းဌာနခွဲများနဲ့ဖိုင်တွေဟာငါရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းစာရေးရေးခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ပါ။
၎င်းသည် chmod command ၏အမှားအယွင်း၊ command ကိုဖွင့်သောဖိုလ်ဒါ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ configured လုပ်ခဲ့သည့် subdirectories များကိုကူးယူနိုင်ခြင်း၏လိပ်စာသည်ကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဒီဆောင်းပါးအပါအ ၀ င်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများတွင်၎င်းသည်၎င်းသည်ပြန်လည်မှန်ကန်စွာမှန်ကန်စွာရရှိနိုင်မည့်အဆင့်များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါ command တစ်ခုခု option ကိုပျောက်ဆုံးလျှင်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်, အင်္ဂလိပ်လိုရှာဖွေခဲ့ပေမယ့်ငါအကြောင်းကိုရှာမတွေ့ပါ။ သို့သျောလညျး, ငါယခင်စမ်းသပ်မှုကနေသွေးဆောင် command ကိုဤ 'chmod -Rv uw ./ *' ကဲ့သို့သုံးနိုင်ပြီး, အကယ်စင်စစ်သူကငါ command ကို execute ရှိရာကနေကူးယူ folder ကိုသို့မဟုတ် directory ၏ခွင့်ပြုချက်, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဆောင်ပုဒ် folder ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ chmod ကိုသုံးရာတွင် './' ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရပါ။
အကယ်၍ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်၏သံသယများကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ။
Bertholdo Suarez Perez အားပြန်ပြောပါ
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ရေးခွင့်ပြုချက်များရှိပြီးဖိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖတ်ခွင့်ပြုချက်များမပါရှိပါက၎င်းဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသလား။
Alvaro Torijano နေရာလွတ် ဟုသူကပြောသည်
Alvaro Torijano အားပြန်ပြောပါ
နောက်ထပ်အရာ - ပါမစ်၏အတိုကောက်မှားသည်။
r က Read အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ အရေးအသားအတွက် Idem ။
Larry Laffer ဟုသူကပြောသည်
ဥပမာ command ကို: chmod -r 777
သုံးစွဲသူများ၊ အုပ်စုများ၊ အခြားသူများမှဖတ်ရန်ခွင့်ပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ရှားလိုက်သည် ၇၇၇ (rwx) ။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အဘယ်သူမျှမအမှတ်စဉ်တန်းတူ ch chmod ur, gr, ဒါမှမဟုတ် ????
Manuel Moreno ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ Linux ကိုဆက်လေ့လာဖို့မျှော်လင့်တယ်
Manuel Moreno အားပြန်ပြောပါ
Andres Reyes ၊ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! အကောင်းဆုံးအလှူငွေ ...
Andres Reyes သို့ပြန်သွားပါ
ရှင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရတယ်။ ဖိုင်တွေကိုပြုပြင်လို့မရဘူး။ ထိုအခါငါ NTFs partition ကိုဖြစ်ပြီးဖြေရှင်းပြီးကတည်းကငါ ntfs-3g installed ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြေး3ဟုသူကပြောသည်
drwxr-xr-x အသုံးပြုသူ၏အစတွင် "d" ပေါ်လာမည်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ငါဒါလမ်းညွှန်ပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါမသေချာဘူး
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ခွင့်ပြုချက် (၃) ခုနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းမည်၊ မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသိပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ခွင့်ပြုချက် (၃) ခုကိုမတူညီသောနေရာ ၃ ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်
-r - r - r– ၁ wada အသုံးပြုသူ ၄၀၉၆ Aprပြီ ၁၃ ၁၉း၃၀ ဖိုင်။
, G switch3ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် "foo" ဟုခေါ်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်မည်သည့် command ကိုမဆို execute လုပ်နိုင်သည်။ https://gswitch3.net
G switch3ကိုပြန်သွားပါ
ကောင်းပါတယ်ဒီအံ့သြဖွယ် post ကို။
ဤသည် infumable scam တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ငါပြောသောစကားကိုမယုံနှင့်။
tomas ramon အားပြန်ကြားပါ
Irving Faulkner ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် chmodw နှင့် chonw အတွက်ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
ငါကောင်းစွာနားမလည်လျှင်တောင်းပန်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖေါ်ပြရန်နမူနာများအားလုံးကိုကြိုးစားကြိုးစားနေသည်။ မတူကွဲပြားသောအုပ်စုများ၏တာ ၀ န်များ၊ rwx ၏ခွင့်ပြုချက်များ၊ စာရေးသားခြင်းကိုကွပ်ကဲခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအားလုံးကိုနားလည်ရန် ls -l command ကို execute လုပ်တဲ့အခါ၊ files and folders, subdirectories တွေ၊ အဲဒီမှာပေါ်လာတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့тамတစ်ခုချင်းစီအကြား hyphen တွေ၊ nautilus ကိုအသုံးပြုပြီး disk မှသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကော်ပီကူးသည့်အခါကူးယူထားသောဖိုင်များအားလုံးပေါ်လာမည် ဖိုင်တွဲတစ်ခုစီ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်လိုချင်သမျှကို root မသုံးဘဲစာဖတ်နိုင်၊ ရေးသားနိုင်၊ execute နှင့်ဖျက်ပစ်နိုင်ခြင်း၊ သော့ခလောက်ရှိသောဖိုလ်ဒါများ၊ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမည်သို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမည်နည်း။
ငါဖတ်ပြီးပါပြီ chmod -R 777 file, folders တွေကိုအမြဲတမ်း execute လုပ်တဲ့ user တစ်ယောက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ file တစ်ခုသို့မဟုတ် ls သို့ ls လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ သူတို့က file ကိုဖတ်လို့မရနိုင်တဲ့အစိမ်းရောင်အစိမ်းနဲ့မီးမောင်းထိုးပြထားတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ linux mint ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်တခြား attribute တွေ၊ အခြား attribute တွေ၊ တခြားအရောင်တွေရှိနိုင်တာကိုငါတွေ့ပြီ။ ငါ 755 ကိုဖတ်လိုက်တယ်။ ဒီဟာကိုသုံးသင့်မသင့်ဆိုတာငါမသိဘူး (chmod - R 755 Folder) ကခွင့်ပြုချက်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်၊ ထို folder ထဲသို့ထားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် directory များအတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် 644 သည်ဖိုင်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေမပြ (chmod -R 644 files)၊ သို့သော် ls ပြီးဆုံးသောအခါ ထို့နောက်ဖိုင်သည် ၆၄၄ ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသူများတွင်မူအမြစ်ပေါ်လာပြီးအခြားသူများမှာမူသုံးစွဲသူများ၏နာမည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တွင်စံပြ command များမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့မှသာဖိုလ်ဒါများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့်ဖိုင်များသည်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များလိုအပ်ပြီးအုပ်စုများသို့ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်။
ls -l လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်
drwxr-xr-x2အမြစ်အမြစ် 4096 ဖေဖော်ဝါရီလ 15 22:32 တစ် ဦး
1r အမြစ် 474 ဖေဖော်ဝါရီ 16 23:37 canaima5 -rwxrwxrwx
1r root -rwxrwxrwx ၃၇၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် ၁၆ း၄ Error_EXFAT
drwxr-xr-x3root root 4096 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ 15: 00 တွင် USB ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
-rw-r - r- 1 m18 m18 7572 ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၁၆ mdmsetup.desktop
-rwxrwxrwx ၁ ရင်းရင်းအမြစ် ၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၃း၇၇ pkme
-rwxrwxrwx ၁ အမြစ်အမြစ် ၁၀၈၀၉ မေ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃ README
-rwxrwxrwx ၁ အမြစ်ရင်း ၅၇ ဇန်နဝါရီ ၃ ၁၁:၅၈ sudo ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ပါ
-rwxrwxrwx ၁ အမြစ်အမြစ် ၁၀၄၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် 1:1049 Rep-Systemback
-rwxrwxrwx 1 root root 1163 ဖေဖော်ဝါရီ 11 11:12 root.txt
1r root -rwxrwxrwx ၃၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊
-rwxrwxrwx ၁ အမြစ်အမြစ်ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၂ torregal
အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှ m18 ဖန်တီးခဲ့သောဖိုင်အချို့ကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန် disk ကို nautilus ဖြင့်အခြား disk တစ်ခုမှကူးယူပြီး၎င်းတို့တွင်သော့ခလောက်များရှိသည်။
drwxr-xr-x3root root 4096 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ 15: 00 တွင် USB ကိုတပ်ဆင်ပါ
drwxr-xr-x2root root ၄၀၉၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၂၂:၃၂ ကကျန်ကျန်တဲ့ဖိုင်များမှာသော့ခလောက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအချက်အလက် command ကိုသုံးတယ်။ အခုဖိုင်များမှာသော့ခလောက်မရှိပေမယ့်သူတို့အဆင်ပြေနေပြီလားမသိဘူး။ သူတို့မှာရှိတဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေ၊ စိတ်ကူးကဖိုင် (သို့) ဖိုင်တွဲတစ်ခုစီမှာဘယ်ခွင့်ပြုချက်ရမယ်၊ ဘယ်အုပ်စုထဲမှာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်။ chmod ထည့်သောအခါမည်သည့်အရာကိုအသုံးပြုရမည်ကိုသိသည်။
m18 @ m18 ~ / Desktop ကို $ ls -l
drw-r ကို - r-2အမြစ်အမြစ် 4096 ဖေဖော်ဝါရီလ 15 22:32 တစ် ဦး
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၄၇၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၂၃ နာရီ ၃၇ ရက် canaima1
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၃၇၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၁၆:၄၄ Error_EXFAT
drw-r - r--3အမြစ်အမြစ် 4096 ဖေဖော်ဝါရီလ 15 00:22 Windows ကိုတပ်ဆင်ခြင်း windows များ
-rw-r - r-1 အမြစ်အမြစ် ၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် ၁၃း၇
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၁၀၈၀၉ မေ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃ README
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၅၇ ဇန်နဝါရီ ၃ ၁၁:၅၈ sudo ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူသည်
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၁၀၄၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် 1:1049 Rep-Systemback
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၁၁၆၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၁၁း၁၂ root.txt
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ် ၃၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊
-rw-r - r ၁ အမြစ်အမြစ်ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၂ torregal
m18 အတွက် [ဆူဒို] စကားဝှက်
sudo: ugo + rwx: command မတွေ့ပါ
drwxrwxrwx2အမြစ်အမြစ် 4096 ဖေဖော်ဝါရီလ 15 22:32 တစ် ဦး
drwxrwxrwx3root root 4096 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ 15: 00 တွင် USB ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
-rwxrwxrwx 1 m18 m18 7572 ဒီဇင်ဘာ 22 2016 mdmsetup.desktop
m18 @ m18 ~ / Desktop ကို $ sudo chmod -R 755 ထည့်သွင်းခြင်း \_ de \_ ၀ င်းဒိုး \_ USB \_ t
အခြားတစ်ဖက်တွင်, chown command ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိ။ အချက်အလက်များကိုကူးယူရန် cp command ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြား hard disk တစ်ခုမှ wildcard ပါသည့်ဖိုင်များအား၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်အားလုံးနှင့်အတူကော်ပီကူးသည်၊ သင်၏အသုံးပြုသူအတွက်သာဆက်ရှိနေမည်လား၊ သိုမဟုတ်အမြဲတမ်းသော့ခလောက်နှင့်ဆက်နေခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိပါ။
ငါလိုချင်တာကတစ်ယောက်ယောက်ကပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသိတယ်ဆိုရင်၊ wildcards တစ်ခုစီရဲ့ဥပမာတွေနဲ့ chmod နဲ့ chown ကိုသုံးတယ်။ ၃၇ ဂဏန်းနံပါတ်တွေပေါ်လာတဲ့စားပွဲတွေရှိတယ်၊ ၇၇၇၊ ၆၄၄၊ အဲဒီနံပါတ်ကိုဘယ်လိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာလဲမရှိဘဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးများပြားလာတဲ့နေရာတွေမှာဇယားတွေရှိနေလို့ပဲ။ ugo ၏ summation မှန်ကန်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၊ အုပ်စု (များ) ပိုင်ရှင်များဖြစ်သည်။ ဖိုလ်ဒါများ၊ subdirectories၊ executable files များစသဖြင့် rwx နှင့်အတူဖြစ်သည်။
အဆုံးမှာတော့ငါလိုချင်တာက chmod, chmod, formula အားလုံးကိုသုံးဖို့၊ linux file system တစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးချဖို့ပဲ။
ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းပါကတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းညွှန်အချို့ကိုရှာဖွေနေသည်၊ အုပ်စု၏ခွင့်ပြုချက်များနှင့် chmod နှင့် chonw ပရိုဂရမ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုနားလည်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းရှိရန်လမ်းညွှန်အချို့ကိုရှာဖွေနေသည်။
Irving Faulkner အားပြန်ပြောပါ
ဒန်နီငါသူ့ကို uwu ချစ်ကြတယ်
ဒန်နီငါသူ့ကို uwu ချစ်ကြတယ်။
Ubuntu 14.10 (နှင့်မိသားစု) ကိုဒေါင်းလုတ်မွမ်းမံမှုအတွက်ရရှိနိုင်လား (သို့) မရသလား။